Ane Kursi - Joornaalka Naqshadeynta
Kursi Saqafka Ane wuxuu leeyahay alwaax adag oo alwaax ah oo u muuqda inay si isdaba joog ah u sabayn karaan, laakiin si ka madax bannaan lugaha alwaaxda, oo ka sarreeya xarka birta. Naqshadeeyahu wuxuu sheegayaa in kursiga, gacanta lagu xardhay alwaax ku habboon eco-saaxiibtinimo, lagu sameeyay isticmaalka gaarka ah ee dhawr qaybood oo hal qaab oo alwaax ah oo loo jaray si firfircoon. Markaad ku fadhiisato kursi, kor u kaca yar ee xagasha ilaa dambe iyo xagasha isugeynta ee dhinacyada ayaa lagu dhammeystiraa hab ku siinaya meel dabiici ah, oo fadhiisasho raaxo leh. Saxarada Ane waxay leedahay kaliya heerka saxda ah ee kakanaanta si loo abuuro dhammeystir qurux badan.
Magaca mashruuca : Ane, Magaca naqshadeeyayaasha : Troy Backhouse, Magaca macmiilka : troy backhouse.
Alaabta guriga, qalabka qurxinta iyo naqshadaha guriga
Kursi Troy Backhouse Ane